Poetry » ဆန္ဒ	6
Posted by Alincho on May 18, 2015 in Poetry |6comments
နွေအပူ ရွှေမြေမှာ ငြိမ်းရအောင်
ခင်ဇော် says: သန်းမ ကြီး ကို ခေါ်ပြီး အလှူပေးခိုင်းလိုက်လေ။
Alinsett @ Maung Thura says: .ရွှေမြေ
.ရွှေမိုး. . .
.လေပြေပါ အနားတိုးပေမဲ့ . . .
.အမွဲအတေတွေ အသေ ဆိုးတော့တယ် . .
အိုးးးဗျ ရွှေပြည်တော်. . .
အောင် မိုးသူ says: ခုတော့ အေးချမ်းစွာ ရွာသွန်းနေပါပြီ။ အလင်းချိုစကားကြောင့် အတင်းပိုကာ ရွာချပေးနေတယ်။
lu lu says: :):)
Mike says: .ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်မိုးရွာပေးလိုက်တာ အေးဓါတ်လေးပြန်ရပြီးနေလို့ကောင်းသွားတယ်
Alincho says: နွေအပူ ရွှေမြေမှာ ငြိမ်းရအောင် …
အင်း မိုးရေတွေရွာပေးသလို ၂၀၁၅ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် မိုးလေးလည်း ရွာခွင့်ရရင်ကောင်းမယ်